New Gods: Nezha Reborn (2021) – Gold Channel Movies
Video Sources 20193 Views
တရုတ်ဒဏ္ဍာရီဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရိုက်ကြတဲ့ဇာတ်ကားတွေက အတော်ကိုများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများစုက လူနဲ့ရိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ ငယ်ငယ်ကကြည့်ခဲ့ရတဲ့ သိုင်းကားတွေလောက်တောင် မစွံပါဘူး။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ CGI တွေနဲ့ ကြည့်ရတာ အရမ်းကိုစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ တရုတ်ဒဏ္ဍာရီထဲက ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ နီကျားရဲ့ Animation လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်တရာသေနေတဲ့ စွန်းဝူခုံးမဟုတ်တာတော့ ကျေးဇူးတင်မိတယ်ပဲပြောရမှာပဲ။ .
ဇာတ်လမ်းလေးက ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ဇာတ်အိမ်မှာမှ ခေတ်လွန်ပစ္စည်းလေးတွေပါနေတာပါ။ တစ်မျိုးတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဒုံဟိုင်းမြို့ကို ဒဲဂိုဏ်းက အုပ်ချုပ်ပါတယ်။ ဒဲဂိုဏ်းရဲ့လက်ထဲရောက်မှ ဒုံဟိုင်းမြို့က ရုတ်တရက်ဆို ရေတွေရှားပါးကုန်ပါတယ်။ တစ်အိမ်ကို တစ်ပုံးပဲပေးနိုင်တဲ့အထိကို ရှားပါးသွားပြီးတော့ ဒဲဂိုဏ်းကလူတွေကလည်း ပြည်သူတွေကို ဆက်ဆံတာ မောက်မာလွန်းပါတယ်။ အဲ့ဒီမြို့ရဲ့ ကယ်တင်ရှင်လေးကတော့ လီယွင်းချောင်ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
လီယွင်းချောင်က ဘယ်လိုလူငယ်လေးလဲ။ နီကျားနဲ့ရော ဘယ်လိုပတ်သက်မှာလဲ။ ဒဲဂိုဏ်းနဲ့ ဘယ်လိုတွေ စာရင်းရှင်းမှာလဲ။ ရန်ငြိုးတွေကရော ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုတော့ Animation ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ တော်တော်သဘောကျစရာကောင်းအောင် အချိန်ယူပြီး ရေးဆွဲထားတဲ့ New Gods: Nezha Reborn ကို ကျွန်တော်တို့ GC ကနေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ Sequel ကလည်း နောက်နှစ်ထွက်မယ်ဆိုတော့ ကြည့်ထားလိုက်တာ မမှားဘူးထင်ပါတယ်။
Size – 930MB / 430MB
Genres – Animation, Action, Fantasy
Run Time – 1 Hr 58 mins
Download Userdrive SD Myanmar 430 mb
Download Userdrive HD Myanmar 930 mb
Download Mega SD Myanmar 430mb
Download Mega HD Myanmar 930 mb
Download Mediafire SD Myanmar 430mb
Download Mediafire HD Myanmar 930 mb
BoBoApril 29, 2021Reply
Hein min zawApril 17, 2021Reply
Min khaApril 14, 2021Reply
iOS အတွက် app မရဘူးလား bro? 😒😒
gcmoviesApril 14, 2021Reply
လောလောဆယ်တော့ မရသေးပါဘူး bro